खु:सीको खबर ! पत्ता लाग्यो सुजिता लाई यस्तो सम्म गरेको मुख खो लिन गो प्य कुरा आयो, तुरुन्तै हेर्नुहोस - Seto News
Homeसमाचारखु:सीको खबर ! पत्ता लाग्यो सुजिता लाई यस्तो सम्म गरेको मुख खो...
पत्ता लाग्यो सुजितालाई यस्तो सम्म गरेको मुख खो लिन गो प्य कुरा आयो, भिडियो सहित , भिडियो यो समाचारको अन्त्यमा राखिएको छ, राप्ती नगरपालिका ३ की ४५ व’र्षीया अम्बिका भण्डारीका आँखा ११ दिनदेखि ओभानो भएका छैनन्। रुँदा रुँदा आँखा राता भएका छन् । छिनमै भक्कानिन्छिन्, छिनमै चुप लाग्छिन्। शरीर कमजोर भएर टा उकोमा फे टा बाँ धेकी छिन्। आफूलाई स म्हाल्नै सकेकी छैनन्।
आफन्त र छिमेकी आउँछन्, सान्त्वना दिन्छन् उनीहरू आँखा भरि आँसु बनाउँछन् । अम्बिकाले हराएकी छोरीको पिरलो भए पनि फेला पर्लिन् भनेर चित्त बुझाउँदै बसेकी थिइन् तर २३ वर्षीया छोरी सुजिता आइतबार मृ त फे ला परेको खबर पाएपछि उनी आफूलाई सम्हाल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेकी छन्। छोरी सम्झिँदै छाती पिट्दै रुन्छिन्। मलाई ब चाऊ ! मलाई ब चाऊ भनेर छोरीले रुँदै फोन गरेकी थिई ।
हामीले ब चाउन सकेनौं, उनले रुँदै भनिन्, अ प राधीले त्यस्तो कुनामा लगेर त ड्पाई त ड्पाई मार्यो । ब्रह्मस्थानी सामुदायिक वनमा च्याउ टिप्न गएका एक स्थानीयले आइतबार साँझ शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । वनको बीचमा झाङमा अड्किएको अवस्थामा श व फे ला परेको जनाइएको छ । टा उकोमा कु टेर आँखामा पट्टी बाँ धेछ ।
पछि कहाँ गएर आँखा खुल्यो ? कसरी फोन गर्न भ्याई ? अम्बिकाले घ ट नाको वि वरण सुनाइन्, कसरी हुन्छ अपराधी पत्ता लगाइदिनुस् । मेरी छोरी फर्केर त आउदिन तर अपराधीलाई कारबाही हुनै पर्छ। यो समाचारको, पुरा जानकारी भिडियो हेरेर थाहा पाउनुहोस ।